ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်နာမည်အကြီးဆုံးနာမည် ၂၀ ကျော်ရှိသည် Gadget သတင်း
Facebook က ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူအများဆုံးသောလူမှုကွန်ယက်ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ် + တွင်သုံးစွဲသူအရေအတွက်ထက်သာလွန်သည်၊ သို့သော်ဂေဟစနစ်အတွင်းလုပ်ဆောင်မှုသည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိလိုကြသောအလွန်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာလူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အမည်တူတူတူတူရှိသည်၊ နေရာတိုင်းတွင်စာမျက်နှာများနှင့်အုပ်စုများရှိသည်။
သို့သော်လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏အကူအညီမပါဘဲလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့နိုင်သည့်အများဆုံးအကြိမ်ကြိမ်အမည်များနှင့်အမည်များ၊ အများဆုံးအသုံးပြုသောအမည်များနှင့်အမည်များကိုအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။.
နေ့စဉ်ဤလေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်။ သို့သော် Facebook မှသူကိုယ်တိုင်ဒီအချက်အလက်များကိုပေးရသည်မှာမလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်ရရှိရန်အလွန်ရှည်လျားလွန်းပြီးလူအများစု၏သိလိုစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင်၏ Snapchat Username ကိုပြောင်းလဲနည်း
1 အကြိမ်ကြိမ်အများဆုံးအကြိမ် ၂၀ အမည်များနှင့်အမည်များ
3 အကြိမ်ကြိမ်အများဆုံးအကြိမ် ၂၀
အကြိမ်ကြိမ်အများဆုံးအကြိမ် ၂၀ အမည်များနှင့်အမည်များ
75980 - ယောဟန် SMITH
9322 - ဒေးဗစ် SMITH
8534 - စာရာ SMITH
8397 - ယာကုပ် SMITH
7504 - မာကု SMITH
1037972 - ယောဟန်
647966 - ခရစ်
526198 - မာကု
511504 - ပေါလု
504203 - ဒံ
494945 - ယာကုပ်
484693 - မာရီယာ
473145 - စာရာ
446040 - လော်ရာ
440356 - ရောဘတ်
434239 - လီဆာ
392560 - ပေတရု
392709 - လီ
372486 - ဝီလျံ
255625 - မာတင်
239264 - ပီဇာ
236072 - Miller က
228635 - တေလာ
224529 - သောမတ်စ်
204775 - Khan က
196921 - ဆင်း
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာအကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ်ပြောခဲ့ဖူးသူများထဲမှသင်၏နာမည် (သို့) နာမည်ရှိသလား။.
ရင်းမြစ် - adweek.com
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအမည် ၂၀
LG Optimus G ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်